မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ စွယ်မက်ဖွယ်ကောက်ကြောင်း အလှတွေကိုပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ အကိတ်ဆုံး Cele (၁၀) ဦး – Let Pan Daily
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ စွယ်မက်ဖွယ်ကောက်ကြောင်း အလှတွေကိုပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ အကိတ်ဆုံး Cele (၁၀) ဦး
Let Pan | September 20, 2020 | Celebrity | No Comments
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခါတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကိတ်ဆုံး ကောက်ကြောင်း အလှတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မြန်မာ့အကိတ်ဆုံးနဲ့ နာမည်ကြီး Cele (၁၀) ဦးရဲ့ စာရင်းကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်….
ပရိတ်သတ်ကြီးကို ဘေဘီမောင်နဲ့ကတော့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ ဘေဘီမောင်ကတော့ စွဲမက်ဖွယ်ရာအလှတရားစစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးဖြစ်သလို ပုရိသတွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကိုလည်းရရှိထားပါတယ်နော်။အလှူအတန်းတွေကိုလည်း ရက်ရောသူတစ်ဦးဖြစ်လို့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်နော်…
မင်းသမီးချောလေး ဆုအိမ်စံ ကတော့ မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကိုဝတ်ဆင်တက်ပြီး သူမရဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ရာ ကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပရိသတွေအတွက် ဖော်ပြပေးလေ့ရှိပြီး ဘယ်လိုပုံစံ အဝတ်အစားနဲ့မဆို လိုက်ဖက်လှတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှပတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါနော်။အဲ့တာကြောင့်လည်း ပုရိသတွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ် အားပေးဝန်းရံခြင်းတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နေသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…
ပုရိသတိုင်းရဲ့ အသည်းကျော် အိမ်မက်နတ် သမီးလေး နန်းမွေ့စံကတော့ ဒီစာရင်းရဲ့ နံပါတ် (၈)နေရကနေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သူမကတော့ ဆက်ဆီမော်ဒယ်အဖြစ်အနုပညာလေကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ပုရိသတွေရဲ့ အထူးအာရုံစိုက်ဝန်းရံခြင်းကို ခံရသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အထူးသဖြင့် သူမရဲ့ လုံးဝအကြမ်းစားပုံရိပ်တွေကြောင့် ပုရိသတွေ အမြဲတမ်း အားပေးဝန်းရံခြင်းကို ခံနေရတဲ့ မော်ဒယ်မလေး ဖြစ်ပါတယ်နော်….
ဆက်ဆီမော်ဒယ်မလေး ရှင်ယွန်းမြတ်ကလည်း ပုရိသတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖြားမှာ အထူးရေပန်းစားလှပြီး အမိုက်စားကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကြောင့်လည်း ပုရိသတွေရဲ့ အားပေး ဝန်းရံခြင်းတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်…
မော်ဒယ်မလေးခင်လွှမ်းကတော့ တောင့်တင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုအလှတရားတွေနဲ့အတူ သေးသွယ်တဲ့ခါးနဲ့ လုံးဝန်းကြီးမားလှတဲ့ တင်သားဆိုင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကောင်မလေးဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် သူမရဲ့ တင်သားတွေက ပုရိသတွေ ကြားမှာ အထူးရေပန်းစားလှပါတယ်နော်…
အနုပညာလောကထဲကို စတင် ဝင်ရောက်လာချိန်ကနေ ယနေ့အချိန်ထိ ပုရိသတွေရဲ့ အခိုင်အမာ အားပေးဝန်းရံခြင်းကိုခံနေရတဲ့ ကချင်မော်ဒယ်မလေးတစ်ယေညက်ဖြစ်ပြီး။Single Mom ဘဝနဲ့ ရပ်တည်ကာ သမီးလေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေပေမယ် ခေးကြီးလုကိုတော့ အသေရရ အရှင်ရရ ချူချင်သူတွေ ဝိုင်းနေလောက်အောင် တောင့်တင်းဖြောင့်စင်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှကြီးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက် ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းကျော် ခေးကြီးဖြစ်နေတာပါ….
မော်ဒယ်မလေး စုလှိုင်ဝင်းကိုတော့ ပရိတ် သတ်ကြီး သိရှိပြီူသားဖြစ်မှာပါနော်။အထူးသဖြင့် သူမရဲ့ TikTok လေးတွေက ပုရိသတွေကြားမှာအထူးရေပန်းစားလှပြီး သူမရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ အိမ်မက်ထဲက နတ်သမီးလေးဖြစ်နေမှာတော့ အသေချာပါပဲနော်…
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး အိချောပိုကတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးနေစရာမလိုလောက်အောင်ကို သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။လက်ရှိချိန်မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်လက်ဖြစ်နေပြီး သူမရဲ့ ရူးသွပ်စွဲလန်းဖွယ်ရာ ကောက်ကြောင်းအလှတွေကတော့ ပုရိသတွေရဲ့ စကားဝိုင်းမှာ မပါမဖြစ်နေရာယူထားတာပဲဖစ်ပါတယ်နော်…
မင်းသမီးချောလေးဝါဆိုမိုးဦးကတော့ မော်ဒယ် လောကမှာအောင်မြင်နေပြီး လက်ရှိအချိန်ထိလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေကာ စွဲမက်ဖွယ်ရာ ညှို့ချက်ပြင်းတဲ့ကောင်းကြောင်းအလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မြင်သူတိုင်းက ငေးရလောက်အောင် ပြေပြစ်တဲ့ ကောက်ကြောင်းတွေကြောင့်လည်း ပုရိသတွေရဲ့ အထူးဝန်းရံမှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်….
ပရိတ်သတ်ကြီသရေ ဒီစာရင်း ရဲ့ နံပါတ်တစ်နေရာကို ရယူထားသူကနော့ ပုရိသတွေရဲ့ အချစ်တော် မအေးသောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ မအေးသောင်းကတော့ သူမရဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ စွဲမက်ဖွယ် အလှတရားတွေကို မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး တကယ့်ကို ရှိုက်ဖိုကြီးငယ်အသွယ်သွယ်နဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ အိမ်မက်နတ်သမီးတွေထဲက တစ်ယေညက်အဖြစ်အမြဲပါနေမယ် ဆိုတာတော့ အသေချာပါပဲနော်….
ချစ်ရတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Cele တွေထဲက အကိတ်ဆုံး အတောင့်အဖြောင့်ဆုံး Cele မတ်မတ် (၁၀)ဦးကို ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးအနေနဲ့ သိရှိတဲ့ အကိတ်ဆုံး Cele တွေရှိရင် လည်းပုံလေးတွေနဲ့ တကွ Comment မှာ ဖော်ပြခဲ့ကြပါဦးနော်…
crd : Fb Daily News
ဗိုလျကွီး တို့လာမှ ကြှနျမတို့ ရှာလေး ပွာကသြှားတာပဲ ဆိုတဲ့ ပနျဆယျလို
(၅)ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် သမီးလေး အတွက် ဂုဏ်ယူမဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ လူရွှင်တော် ဂေါ်ဇီလာ
ခဈြစရာအရမျးကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ ဖမျးစား လိုကျတဲ့ မိုးပှငျ့ဖွူ